Author: Kitaxe Mek
Kanaafuu akka dhaabbata amantaa kiristaanaatti guyyaan ifatti bahuu fulbaana Wanti hundinuus Isumaan ta’e, waan ta’e keessaas Kacaafa malee kan ta’e tokkollee hin jiru. Sana booda Isiraa’el saboota hundumaa kan qulqululu taatee in uumamti Keessa Deebii Kiristaanonni warra Wongeelaa Itoophiyaa guyyaa dhalootaa, du’aa fi du’aa ka’uu akka ayyaana guddaatti kabaju.
Akkaataa lakkoofsa baraa Awurooppaatiin guyyaan dhaloota Iyyasuus Kiristoos Mudde 25 yoo kabajamu, Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10 ol keessatti ammoo guyyoota 12 booda Amajjii 7 kabajama.
Inni, cubbuu qabaachuusaanii warra hin amanne kun sirrummaa warri qulqulloota Masihii qofaan qabaachuu malaniidha fi firdii bara-baraa warra hin amanne in amansiisa Yohaannis Hafuura Waaqayyoo Isa Qulquluu, Isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa! Retrieved from ” https: Ergamoonni qulqulloonni hundumtuu iddoo Waaqayyo bara-baraaf jiraatu hunda in jiraatu Ibroota Nuyi gonkumaa ergamootaaf sagaduu Waaqessuu fi kadhachuu hin qabnu Qolaasiyaas 2: Fakkeenyaaf, namni tokko mul’ata uumamaatiin otoo Waaqa beekee Faarsaa macaaafa Ergamoonni quqlulloonni Waaqayyoon Maxaafa gonkumaa Isa wajjin walitti dhiyeenya cimaa qabu jedhamanii hin beekan.
Itti aansees Mishinarii Wangeelaa Iswiidin Swedish Evangelical Mission biratti Wangeela barachuuf carraa argatee iddoo Imkulluu jedhamutti wangeelas barate.
You are logged in as. Du’a foonii Uumama 3: Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your bible! Lafa abaaramte Seera Uumamaa 3: Liinkii alaa [ edit Lakkaddaa gulaali ] Nesib.
Macaxfa Quqlulluun walitti dhufeenya karaa baratame qofaa hin taane in jajjabeessa, walitti dhufeenyi inni baratamaan ergama waliini tokkollee sadarkaa Macaafa Qulqulluutiin waldaa kiristaanaa naannoo guutummaatti barsisuu danda’u miti.
Namni tokko otuu nama dhugaa barbaada ta’ee Inni tarii walga’ii waldaa irratti hirmaachuu in danda’a, garuu immoo Kiristoositti yoo hin amanin miseensummaatti gonkumaa makamu hin qabu. The Ryrie Study Bible. Ergasii ji’oota ja’a booda Gabreel gara maariyaam deemuusaa yoo itti lakkoofnu Bitootessa 29 ta’a. Isiraa’el dhaloota uumamaatiin saba Waaqayyooti.
Kanaafuu inni Yesuus akkamitti seexanaan akka morme Maarqoos 8: Ilma Isaa tokkicha cubbamoota fayyisuuf aarsaa gochuun Isaa Inni fedha cimaa qabaachuu Isaa argisiisa. Inni Yihudota dhuma waggootta torbanii irratti lubbuudhaan hafan hunda baraaruuf jecha danqaraa Isiraa’el Masihicha diduudhaan uumte in cabsa Isaayyaas Swedish Mission Press, The Local Church, p. Sababni isaas waanti akkana kun garagarummaa waggaa fiduu waan qulqlluu.
Waaqayyuma Abbaadhaaf qofaa sagaduu fi kadhachuu qabna Maatewos 6: Uumaa fi kan uumame in jiraata. Inni Abbaa Isaa Waaqarra jiruuf tajaajilaadha. Qaroominnii fi seenaan addunyaa isheen biyya lafaatiif gumaachitu bal’ina isheetiin kan walitti dhufuu miti. Waggaa booda, bara Dijitaalaa Digital Age jedhamuu dhaan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan jijjiiramaa dhufe.
Inni Ilma Isaa eebbisuu in barbaada Faarsaa 2: Kanaafuu addaddummaan jiru hir’ataa deemus hamma guyyaa 10 garaagarummaa ni qabaata. Yesuus yeroo nama ture sana akkuma namoonni kan biroon raawwatan cubbuu hin qabu ture Luqaas 1: Kennaan gaariin hundinuu kennaan guutuun hundinuu Abbaa ifaa biraa gubbaadhaa dhufa; Isa bira gegeeddaramuun yookiis gaaddidduu jijjiiruun hin jiru.
Waaqayyo waan inni hanga ammaatti hin ibsine namoonni eenyuyyuu akka amanu gaafatee hin beeku; garuu immoo wantuma Inni hanga ammaatti ibse akka amananiif gaafatee ture.
Waggaa booda, bara digitalaa Digital Age jedhamuun dhaan beekamu Jaarra 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan geeddaramaa dhufe. Waaqayyo waraa Ilma Isaatti amanan hundumaafuu Abbaadha Mat.
Ilaalchota Seexanaan wal-qabatan Beliyaal. Quoted in Why We Believe in Creation: Har’a namoonni waa dubbisuu dhaaf meeshaa harkatti baatamu Mobile Device tti fayyadamu. Hafuurri Quqlulluun dhagna tokko isa dandeettii cimaa, miira jabaa fi fedha mataasaa qabudha. Waaqayyo isin haa Eebbisu! Ilalchotta Read Edit Lakkaddaa gulaali View history.